Tile Leveling System ပေးသွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ - China Tile Leveling System ထုတ်လုပ်သူများ
အာမခံ-2နှစ် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု- အွန်လိုင်း နည်းပညာပံ့ပိုးမှု ပရောဂျက်ဖြေရှင်းနိုင်မှု စွမ်းရည်- အခြား ပင်ရင်းနေရာ- Zhejiang, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OHELE မော်ဒယ်နံပါတ်: OH-FP02 ကုန်ပစ္စည်းအမည်- ဒီဇိုင်းသစ် အချိန်ကုန်သက်သာသော ကြမ်းပြင်ပလာယာ ပစ္စည်း: PP+သံ အသုံးပြုမှု : နယ်စပ်၊ ကြွေထည်၊ နံရံ၊ ကြမ်းပြင် စသည်တို့ကို ဆောက်လုပ်ရေး ကိရိယာ အသုံးပြုနည်း- အုတ်ကြွပ် ချိန်ခြင်း စနစ် အရောင်- စိတ်ကြိုက် အသုံးချမှု- အဆင့် ကြွေပြား ဆက်စပ်ပစ္စည်း အမျိုးအစား- အချိန်ကုန်သက်သာ ကြမ်းခင်း ပလာယာများ ထုပ်ပိုးခြင်း 1pcs/bag NW 0.37KG/bag Lay ဘိလပ်မြေ...
နံရံကြမ်းပြင် ကြွေပြားညှိခြင်းစနစ်က သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆွဲညှိနိုင်သော ကြွေပြားများ အဆင့်တင်ခြင်းစနစ် ပလာယာများ
မူလနေရာ: Wenzhou, Zhejiang, တရုတ်နိုင်ငံ
Plastic Modling အမျိုးအစား- ထိုးဆေး
ပစ္စည်း: PP အသစ်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်- ကြွေပြားအညှိစနစ် ကလစ်သပ်သပ်
လုပ်ဆောင်ချက်- ကြွေပြားကို ညှိခြင်း။
အလေးချိန် 350 ဂရမ်/အိတ်
စျေးကွက်: ဥရောပ၊ အမေရိက
မော်ဒယ် OH-FP01 အမည် ကြမ်းပြင် ပလီယာ ထုပ်ပိုးမှု 1pcs/bag NW 0.36KG/အိတ် လိုအပ်သလို ဘိလပ်မြေ သို့မဟုတ် ကြွေပြားကော်ကို လိုအပ်သလို ကြွေပြားအုတ်ချပ်ကြားတွင် အလင်းဝင်ပေါက်ရှိ အောက်ခြေကို ရာဘာတူဖြင့် ခေါက်ပါ အနီရောင်သပ်ထည့်ပါ သပ်ကို တွန်းအားရှိသော မီးညှပ်ဖြင့် တွန်းပါ 24 နာရီ စောင့်ပါ။ 24 နာရီကြာပြီးနောက် အရင်းကို ရာဘာတူဖြင့် ချိုးပြီး ခြေဖဝါးအပေါ်ဘက်ခြမ်းမှ အောက်ခြေပိုင်းကို ခွာထုတ်နိုင်စေရန်အတွက် အောက်ခြေပိုင်းသည် အလွန်ပါးလွှာပါသည်။
Tuscan Tile Leveling စနစ်
ကြွေပြားများ ညှိခြင်းစနစ်သည် တပ်ဆင်မှုကို မြန်ဆန်ပြီး တစ်ပြေးညီဖြစ်စေသည်။၎င်းတို့ကို ကြွေပြား၏အလေးချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိလောက်အောင် မာကျောသော ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။၎င်း၏ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောအနားသတ်များကြောင့် သင်သည် သင်၏အခင်းအလုပ်များအားလုံးတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။1. ကျွန်ုပ်တို့တွင် မတူညီသော ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရန် မတူညီသော မော်ဒယ်နံပါတ် ရှိပါသည်။2.ကျွန်ုပ်တို့၏ tile spacers များကို 100% လတ်ဆတ်သော ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။၎င်း၏ အားသာချက်မှာ ဇွဲကောင်းခြင်း၊ အဆိပ်မရှိခြင်း၊ အရသာမရှိ၍ တာရှည်ခံခြင်း၊3.Plastic Tile Spacers 1MM to 10MM နံရံအတွက်...
ကုန်ပစ္စည်းအမည်- ကြွေပြားညှိခြင်းစနစ် အရောင်- အနက်ရောင်/လိမ္မော်ရောင် ပစ္စည်း- PP အသစ်(သတ္တုစတီးလ်) ထုပ်ပိုးမှု- 50PCS/အိတ်(ဖဲလိမ် 1 ခုပါရှိသော) ချုပ်ရိုးအထူ- 1. 5MM အသုံးပြုနိုင်သော ကြွေပြားအထူ- 3MM-16MM 1.ဤအုတ်ကြွပ်အညှိစနစ်ကိရိယာများ ကြမ်းပြင် / နံရံ setting အတွက်။စနစ်သည် မညီမျှမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ကြွေပြားများကြား ညီညာစေပါသည်။2. အုတ်ကြွပ်အဆင့်ခြင်းစနစ်သည် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် အထူးဖဲပြားဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် လုံလောက်ပါသည်။3. ကြွေပြား၏ 3mm မှ 16mm အထူအတွက် သင့်လျော်သည်၊ tile gap 1.5mm အတွက် သင့်လျော်သည်။4.The...
၎င်းတို့ကို ကြွေပြားများကြားတွင် ထည့်ထားပြီး ကြွေပြားများ၏ တူညီသောအကွာအဝေးကို အာမခံချက် 1.Plastic tile spacer PE ပစ္စည်း 2.Tile cross standard size Plastic Tile Spacer Production: ဆေးထိုး အရွယ်အစား: တိကျသော dismension 1.0mm ;1.5 မီလီမီတာ;2.0 မီလီမီတာ ;2.5 မီလီမီတာ;3.0 မီလီမီတာ ;4.0mm;5.0mm ;6.0mm;8.0mm;10.0mm ပစ္စည်း- HDPE အရောင်: အဖြူရောင် အသုံးပြုမှု- ကြွေပြား၊ ဖန်သား၊ နံရံများ၊ ဂရပ်ဖစ်၊ နံရံ၊ ကြမ်းပြင်ကြွေပြားများ၊ အလူမီနီယမ်-ပလပ်စတစ်ပြားကဲ့သို့သော အလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ တပ်ဆင်မှု၏ အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
Tile Leveling Wedge ၊
ကုန်ပစ္စည်းအမည် ကြွေပြားခင်းခြင်းစနစ် မော်ဒယ် OH-TLW01 ပစ္စည်းပတ်ဝန်းကျင် PP အရောင် အနီရောင်၊ အပြာ၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ လိမ္မော် (အရောင်အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်) စံမှိုများကို အီတလီစံနှုန်းအဆင့် ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ် OHELE တွင် အသုံးပြုသော နံရံနှင့်ကြမ်းပြင်ကြွေပြားမော်ဒယ် OH -TLW01 အမည် ပြန်သုံးနိုင်သော သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထုပ်ပိုးမှု 100pcs/bag NW 0.59KG/အိတ် လိုအပ်သလို လိုအပ်သလို ဘိလပ်မြေ သို့မဟုတ် ကြွေပြားကော်လွှာ ကြွေပြားအပေါက်ကြားတွင် အောက်ခံကို ရော၍ အပြားလိုက် ခေါက်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအမည် ကြွေပြားခင်းခြင်းစနစ် မော်ဒယ် OH-TLC01၊OH-TLC02၊OH-TLC03၊ ၊OH-TLC04 ပစ္စည်းပတ်ဝန်းကျင် PP အရောင်ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော (အရောင်အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) Standard Molds များကို Italian Standard Grade Top Grade အရ အသုံးပြုပြီး Wall and Floor ကြွေပြားပုံစံ OH-TLC01-1 ကြွေပြားအကွာအဝေး 1.0 မီလီမီတာ ထုပ်ပိုးမှု 100pcs/အိတ် NW 0.29KG/အိတ် မော်ဒယ် OH-TLC01-1.5 ကြွေပြားအကွာအဝေး 1.5 မီလီမီတာ ထုပ်ပိုးမှု 100pcs/အိတ် NW 0.3KG/အိတ် မော်ဒယ် OH-TLC01-2 C .။
Screw-type Tile Leveling စနစ်
မော်ဒယ် OH-TLC05-1 ကြွေပြားအကွာအဝေး 1.0 မီလီမီတာ ထုပ်ပိုးမှု 100pcs/အိတ် NW 0.21KG/အိတ် မော်ဒယ် OH-TLC05-1.5 ကြွေပြားအကွာအဝေး 1.5 မီလီမီတာ ထုပ်ပိုးမှု 100pcs/အိတ် NW 0.23KG/အိတ် မော်ဒယ် OH-TLC05-2 Ceramic tile spacing. မီလီမီတာ ထုပ်ပိုးမှု 100pcs/အိတ် NW 0.24KG/အိတ် မော်ဒယ် OH-TLC06-1 ကြွေပြားအကွာ 1.0mm ထုပ်ပိုးမှု 100pcs/အိတ် NW 0.29KG/အိတ် မော်ဒယ် OH-TLC06-1.5 ကြွေပြားအကွာအဝေး 1.5mm ထုပ်ပိုးမှု 100pcs/bag NW မော်ဒယ် OH-TLC06-2 ကြွေထည် တီ...